Kaokazy : fampivoarana ny fiainana ara-tsosialy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Avrily 2010 7:19 GMT
Vakio amin'ny teny Français, русский, Español, Italiano, فارسی, македонски, English
Na dia mbola mihisatra aza ny fidiran’ny internet any Atsimon'ny Kaokazy, ny fambara rehetra dia maneho fa ireo haino aman-jerim-baovao sy ara-sosialy dia mitana andraikitra lehibe eo amin'ny tontolon'ny fampivelarana ny demokrasia sy ny hafanam-po any an-toerana. Miaraka amin'izany fijery izany ao an-tsaina, ny Open Society Georgia Foundation (OSGF), ny Georgian Institute of Public Affairs (GIPA) sy ireo mpanome tànana hafa dia nikarakara ny Fihaonana voalohany ho an'ny Fanavaozana ara-Sosialy ao Tbilissi, any Georgie ny 8-10 Aprily, hetsika izay hokarakaraina midanindran-dàlana amin'ny fihaonambe momba ny Haino aman-jery ara-Sosialy ho an’ny Fanovana Sosialy.
Ireo mpikarakara any an-toerana ny Fihaonana ho an'ny Fanavaozana ara-tsosialy any Kaokazy, ilay mpanoratra ao amin'ny Global Voices Anna Keshelashvili any Georgia, ilay mpandrindra Onnik Krikorian any Armenia avy ao amin'ny Global Voices, ary Emin Huseynzade avy ao amin'ny Transitions Online's any Azerbaijan, dia nanaparitaka ity hetsika ity nandritra ny iray volana ka nahasarika mpandray anjara folo avy amin'ireo firenena telo ireo. Think from A to Z. dia nanazava amin'ny ankapobeny ny hevitra ambadiky ny Fihaonana ho an'ny Fanavaozana ara-tSosialy any Kaokazy.
Misy horonantsary fohifohy koa azo jerena amin'ny aterineto.
This is Tbilisi Calling dia faly manokana fa mahery fo Armeniana iray mpiaro tontolo iainana no mpandresy tamin'ny Fihaonana ho an'ny Fanavaozana ara-tSosialy.
Mandritra izany, tao amin’ny Fivorian'ny Haino aman-jery ara-tSosialy ho an'ny fanovàna ara-tsosialy, ny mpandrindra isam-paritra Onnik Krikorian ao amin'ny Global Voices any Kaokazy dia mbola nanolotra indray, niaraka tamin'ny mpitoraka blaogy Azerbaijani Arzu Geybullayeva, ny andraikitry ny haino aman-jery sosialy amin'ny fiovaovan'ny fifanolanana. Ireo sary, miaraka amin'ny an'ilay mpandresy Shukudyan, dia azo jerena ao amin'ny blaogin'ny Frontline Club.
Jereo ny fanampin'ny fanolorana ao amin'ny Oneworld Multimedia.
Jereo ny fanampin'ny fanolorana ao amin'ny SICAMP Caucasus.